Balloon D’ Or ကုို ဆွတ်ခူးနိုင်မယ့် ခြေစွမ်းမျိုး ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ ကစားသမား တစ်ဦး အမည်ကို ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားတဲ့ ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှူးဟောင်း #ဆာဟာ - SPORTS MYANMAR
Balloon D’ Or ကုို ဆွတ်ခူးနိုင်မယ့် ခြေစွမ်းမျိုး ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ ကစားသမား တစ်ဦး အမည်ကို ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားတဲ့ ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှူးဟောင်း #ဆာဟာ
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ တိုက်စစ်မှူးဟောင်း တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ လူးဝစ် ဆာဟာ က လက်ရှိ သူ့ရဲ့ အသင်း ဟောင်းမှာ ကမ္ဘာ့ အဆင့် ခြေစွမ်း ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ ကစားသမား တစ်ဦး သာ ရှိကြောင်း ၊ သူ တစ်ဦး တည်းသာ Balloon D’ Or ကို ဆွတ်ခူး နိုင်မယ့် ခြေစွမ်း မျိုး ပိုင်ဆိုင် ထားကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
လူးဝစ် ဆာဟာ ပြောလို တဲ့ ကစားသမား ကတော့ အခြား သူ မဟုတ် ပါဘူး ၊ လက်ရှိ ယူနိုက်တက် အသင်း မှာ ခြေစွမ်း ကောင်းတွေ မပြသ နိုင်ခဲ့ တာကြောင့် ဝေဖန် မှုတွေ အကြား ရုန်းကန် နေခဲ့ ရတဲ့ ကွင်းလယ်လူ ပေါလ် ပေါ့ဂ်ဘာ အကြောင်း ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
” သူ (ပေါ့ဂ်ဘာ) ဟာ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမား ဆု ဖြစ်တဲ့ Balloon D’ Or ကို ဆွတ်ခူး နိုင်ဖို့ အလား အလာ ကောင်း ၊ အရည်အသွေး ကောင်းတွေ အများကြီး ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ ကစားသမား တစ်ဦး ပါပဲ ”
” ဒါဟာ အခြား သော ကစားသမား တွေ အပေါ် မလေးမစား လုပ်ခြင်း မဟုတ် ပါဘူး ။ ပေါ့ဂ်ဘာ အနေ နဲ့ ‘ ငါဟာ လက်ရှိ ဒီ အသင်းမှာ ရှိနေတဲ့ တစ်ဦး တည်းသော ကမ္ဘာ့ အဆင့်မီ ကစား သမား တစ်ဦး ပါ ‘ လို့ ပြောလို့ တောင် ရနိုင် ပါတယ် ။ သူဟာ အဲ့ဒီ မှာ တစ်ဦး တည်းသော ထိပ်တန်း ကစားသမား ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒါကို မဆိုင်းမတွ ပြောနိုင် ပါ လိမ့်မယ် ”
” အကယ်လို့ သူသာ ခြေစွမ်း ကောင်းတွေ မပြ နိုင်ခဲ့ ရင် သူ့ထက် ပိုပြီး မေးခွန် ထုတ်ခံ ရတဲ့ ကစားသမား မရှိ ပါဘူး ။ ပေါ့ဂ်ဘာ ကတော့ တက်နိုင် သလောက် အကောင်းဆုံး ကြိုးစား နေတာ ပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ မှာ သူ့ကို ကူညီ ပေးနိုင် မယ့်သူ မရှိ ပါဘူး ”
” အကယ်လို့ ရလဒ် ကောင်းတွေ မရရှိ ခဲ့ဘူး ဆိုရင် အရင်ဆုံး ဝေဖန် ခံရမယ့် သူက ဘယ်သူ လို့ ထင်လဲ ? အဲ့ဒီ ဝေဖန် မှု တွေက ပေါ့ဂ်ဘာ ဆီပဲ သွားမှာ ပါ ” လို့ လူးဝစ် ဆာဟာ က သုံးသပ် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
ဂျူဗင်တပ် မှာ လေးနှစ် ကစား ခဲ့တဲ့ နောက် ယူနိုက်တက် ဆီ ပြန်လာ ပြီး သုံးနှစ် ကစား ပေး ခဲ့တဲ့ ပေါ့ဂ်ဘာ က ပြီး ခဲ့တဲ့ နွေ အပြောင်း အရွှေ့ မှာ သူဟာ စိန်ခေါ် မှု အသစ် တွေကို ရင်ဆိုင် လိုကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြား ထားခဲ့ ပေမယ့် အပြောင်း အရွှေ့ ပိတ်သိမ်း သွားတဲ့ အထိ အိုးလ် ထရပ်ဖို့ဒ် မှာပဲ ဆက်လက် ရှိနေ ခဲ့ရ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် အပြောင်း အရွှေ့ ကိစ္စ အကောင် အထည် မဖော်နိုင် ခဲ့တဲ့ ပေါ့ဂ်ဘာ ဟာ ယူနိုက်တက် ဂျာစီ ကို ဝတ်ဆင် ကစား ရင်းနဲ့ သူ့ရဲ့ ပုံစံ ကောင်း တွေကို ပြန်လည် ရှာဖွေ တွေ့ရှိ လိမ့်မယ် လို့ ယုံကြည် ထားကြောင်း ဆာဟာ က ဆက်လက် ပြောကြား သွားခဲ့ ပါတယ် ။
” သူဟာ မကစား ပေးချင်ဘူး ဆိုပြီး ပုန်းရှောင် နေလို့ ရနိုင် ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ရာသီ အစ တုန်းက သူ တစ်ကယ် ပဲ ကောင်းမွန်စွာ ကစား ပေးနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ စွမ်းရည် တွေကြောင့် သူဟာ ယူနိုက်တက် ကို တစ်ကယ် ပဲ ကိုယ်စား ပြု နိုင်တဲ့ ကစားသမား တစ်ဦး ပါပဲ ”
” ဒါ့ကြောင့် ယူနိုက်တက် ဖက်က လည်း သူ့ဆီ က အကောင်းဆုံး တွေကို ရရှိ နိုင်ဖို့ အတွက် တောင်းဆို နိုင်ခွင့် တွေ ရှိနေ ပါတယ် ။ ဒါကေမယ့် သူ အဲ့တာ တွေ အမြဲ လုပ်ပေး နိုင်မှာ တော့ မဟုတ် ပါဘူး ၊ ဘာဖြစ် လို့လဲ ဆိုတော့ သူလည်း လူသား တစ်ဦး ပဲလေ ” လို့ ဆာဟာ က အဆုံးသတ် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
ပေါ့ဂ်ဘာ ဟာ ယူနိုက်တက် တို့ ဝုလ်ဗ် ကို သရေ သာ ကစား နိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် အပြီး လူမှု ကွန်ယက် အပေါ် မှာ လူမျိုးရေး ခွဲခြား ခံခဲ့ ရ သလို နောက် တစ်ပါတ် အကြာ ကာရင်တန် လေ့ကျင့်ရေး ကွင်းမှ သတိပေး ဆိုင်းဘုတ် အပေါ် ‘ Pogba Out ‘ ဆိုတဲ့ စာသား နဲ့ ဆန္ဒ ပြခံ ခဲ့ရ သူပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
Balloon D’ Or ကုို ဆှတျခူးနိုငျမယျ့ ခွစှေမျးမြိုး ပိုငျဆိုငျ ထားတဲ့ ကစားသမား တဈဦး အမညျကို ထုတျဖျော ပွောကွား သှားတဲ့ ယူနိုကျတကျ တိုကျစဈမှူးဟောငျး #ဆာဟာ
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ရဲ့ တိုကျစဈမှူးဟောငျး တဈဦး ဖွဈတဲ့ လူးဝဈ ဆာဟာ က လကျရှိ သူ့ရဲ့ အသငျး ဟောငျးမှာ ကမ္ဘာ့ အဆငျ့ ခွစှေမျး ပိုငျဆိုငျ ထားတဲ့ ကစားသမား တဈဦး သာ ရှိကွောငျး ၊ သူ တဈဦး တညျးသာ Balloon D’ Or ကို ဆှတျခူး နိုငျမယျ့ ခွစှေမျး မြိုး ပိုငျဆိုငျ ထားကွောငျး ထုတျဖျော ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
လူးဝဈ ဆာဟာ ပွောလို တဲ့ ကစားသမား ကတော့ အခွား သူ မဟုတျ ပါဘူး ၊ လကျရှိ ယူနိုကျတကျ အသငျး မှာ ခွစှေမျး ကောငျးတှေ မပွသ နိုငျခဲ့ တာကွောငျ့ ဝဖေနျ မှုတှေ အကွား ရုနျးကနျ နခေဲ့ ရတဲ့ ကှငျးလယျလူ ပေါလျ ပေါ့ဂျဘာ အကွောငျး ပဲ ဖွဈ ပါတယျ ။
” သူ (ပေါ့ဂျဘာ) ဟာ ကမ္ဘာ့ အကောငျးဆုံး ကစားသမား ဆု ဖွဈတဲ့ Balloon D’ Or ကို ဆှတျခူး နိုငျဖို့ အလား အလာ ကောငျး ၊ အရညျအသှေး ကောငျးတှေ အမြားကွီး ပိုငျဆိုငျ ထားတဲ့ ကစားသမား တဈဦး ပါပဲ ”
” ဒါဟာ အခွား သော ကစားသမား တှေ အပျေါ မလေးမစား လုပျခွငျး မဟုတျ ပါဘူး ။ ပေါ့ဂျဘာ အနေ နဲ့ ‘ ငါဟာ လကျရှိ ဒီ အသငျးမှာ ရှိနတေဲ့ တဈဦး တညျးသော ကမ္ဘာ့ အဆငျ့မီ ကစား သမား တဈဦး ပါ ‘ လို့ ပွောလို့ တောငျ ရနိုငျ ပါတယျ ။ သူဟာ အဲ့ဒီ မှာ တဈဦး တညျးသော ထိပျတနျး ကစားသမား ဖွဈတဲ့ အတှကျ ဒါကို မဆိုငျးမတှ ပွောနိုငျ ပါ လိမျ့မယျ ”
” အကယျလို့ သူသာ ခွစှေမျး ကောငျးတှေ မပွ နိုငျခဲ့ ရငျ သူ့ထကျ ပိုပွီး မေးခှနျ ထုတျခံ ရတဲ့ ကစားသမား မရှိ ပါဘူး ။ ပေါ့ဂျဘာ ကတော့ တကျနိုငျ သလောကျ အကောငျးဆုံး ကွိုးစား နတော ပါပဲ ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီ မှာ သူ့ကို ကူညီ ပေးနိုငျ မယျ့သူ မရှိ ပါဘူး ”
” အကယျလို့ ရလဒျ ကောငျးတှေ မရရှိ ခဲ့ဘူး ဆိုရငျ အရငျဆုံး ဝဖေနျ ခံရမယျ့ သူက ဘယျသူ လို့ ထငျလဲ ? အဲ့ဒီ ဝဖေနျ မှု တှကေ ပေါ့ဂျဘာ ဆီပဲ သှားမှာ ပါ ” လို့ လူးဝဈ ဆာဟာ က သုံးသပျ ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
ဂြူဗငျတပျ မှာ လေးနှဈ ကစား ခဲ့တဲ့ နောကျ ယူနိုကျတကျ ဆီ ပွနျလာ ပွီး သုံးနှဈ ကစား ပေး ခဲ့တဲ့ ပေါ့ဂျဘာ က ပွီး ခဲ့တဲ့ နှေ အပွောငျး အရှေ့ မှာ သူဟာ စိနျချေါ မှု အသဈ တှကေို ရငျဆိုငျ လိုကွောငျး ထုတျဖျော ပွောကွား ထားခဲ့ ပမေယျ့ အပွောငျး အရှေ့ ပိတျသိမျး သှားတဲ့ အထိ အိုးလျ ထရပျဖို့ဒျ မှာပဲ ဆကျလကျ ရှိနေ ခဲ့ရ ပါတယျ ။
ဒါပမေယျ့ အပွောငျး အရှေ့ ကိစ်စ အကောငျ အထညျ မဖျောနိုငျ ခဲ့တဲ့ ပေါ့ဂျဘာ ဟာ ယူနိုကျတကျ ဂြာစီ ကို ဝတျဆငျ ကစား ရငျးနဲ့ သူ့ရဲ့ ပုံစံ ကောငျး တှကေို ပွနျလညျ ရှာဖှေ တှရှေိ့ လိမျ့မယျ လို့ ယုံကွညျ ထားကွောငျး ဆာဟာ က ဆကျလကျ ပွောကွား သှားခဲ့ ပါတယျ ။
” သူဟာ မကစား ပေးခငျြဘူး ဆိုပွီး ပုနျးရှောငျ နလေို့ ရနိုငျ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ရာသီ အစ တုနျးက သူ တဈကယျ ပဲ ကောငျးမှနျစှာ ကစား ပေးနိုငျ ခဲ့ ပါတယျ ။ သူ့ရဲ့ စှမျးရညျ တှကွေောငျ့ သူဟာ ယူနိုကျတကျ ကို တဈကယျ ပဲ ကိုယျစား ပွု နိုငျတဲ့ ကစားသမား တဈဦး ပါပဲ ”
” ဒါ့ကွောငျ့ ယူနိုကျတကျ ဖကျက လညျး သူ့ဆီ က အကောငျးဆုံး တှကေို ရရှိ နိုငျဖို့ အတှကျ တောငျးဆို နိုငျခှငျ့ တှေ ရှိနေ ပါတယျ ။ ဒါကမေယျ့ သူ အဲ့တာ တှေ အမွဲ လုပျပေး နိုငျမှာ တော့ မဟုတျ ပါဘူး ၊ ဘာဖွဈ လို့လဲ ဆိုတော့ သူလညျး လူသား တဈဦး ပဲလေ ” လို့ ဆာဟာ က အဆုံးသတျ ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
ပေါ့ဂျဘာ ဟာ ယူနိုကျတကျ တို့ ဝုလျဗျ ကို သရေ သာ ကစား နိုငျခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျ အပွီး လူမှု ကှနျယကျ အပျေါ မှာ လူမြိုးရေး ခှဲခွား ခံခဲ့ ရ သလို နောကျ တဈပါတျ အကွာ ကာရငျတနျ လကေ့ငျြ့ရေး ကှငျးမှ သတိပေး ဆိုငျးဘုတျ အပျေါ ‘ Pogba Out ‘ ဆိုတဲ့ စာသား နဲ့ ဆန်ဒ ပွခံ ခဲ့ရ သူပဲ ဖွဈပါတယျ ။